Ole Gunnar Solskjaer oo Guul weyn ku hogaamiyay Manchester United Kulankiisa ugu Horreeya..+SAWIRRO – Gool FM
( Premier League ) 22 Dis 2018. Manchester United ayaa gaartay guul ay ku raaxeysatay markii ay xaaqeen Cardiff City kaddib markii ay uga badiyeen 5-1.
Cayaarta ayaa qeybta hore lagu kala maray 3-1 oo ay ku hogaamineysay United, waxaana bilaabay bandhiga goolasha laacibka Marcus Rashford oo kubbad free kick ah dhaliyay markii cayaartu kaliya socotay 3-daqiiqo.
Kooxda guriga ee Cardiff ayaa gool soo ceshaya waxaana u dhaliyay xiddigooda Victor Camarasa.
Kullanka oo ku dhaw saacad barkeed Ander Herrera ayaa goolka labaad u dhaliyay Red Devils halka uu goolka seddaxaad ee lagu kala maray dheesha uu shabaqa ku hubsaday Anthony Martial.
Dib markii loogu soo laabtay kaambiyaha labaad Jesse Lingard ayaa rigoore ku dhaliyay goolka afaraad isla isaga ayaan soo xiray goolasha guusha weyn ay ku gaartay United daqiiqadii 90-aad.
Guushan ayaa kusoo aadeysa xilli kooxda ay shaqada ka ceyrisay Jose Mourinho todobaadkii hore waana markii u horreeyay oo ay Manchester united ku awood roonaato shan gool hal kullan tan iyo cayaartii u dambeysay uu kooxda leyliyay Alex Fergusen sanadkii 2013-kii.